Vhidhiyo yakaburitswa inoratidza yakatetepa skrini uye kuwedzera kwebhatiri muApple Watch 2 | IPhone nhau
Vhidhiyo inodonha inoratidza yakatetepa skrini uye yakawedzera hupenyu hwebhatiri pane iyo Apple Watch 2
Asingasviki vhiki kuenda kuApple inotevera inotevera Keynote, Ini ndiri mumwe weavo vanofarira software yaKeynote: pakupedzisira vanopa chimwe chinhu chatinogona kuyedza (mubeta) zuva rinotevera uye hatizombofaniri kushandisa mari ... Kunze kwemajee, musi waGunyana 7 tichapupura kuberekwa kweinotevera iPhone 7, uye ndiani anoziva kana tichizoona itsva Apple Watch 2.
Uye panguva ino zvaisazove zvishoma, pane runyerekupe rwunosvinwa zuva nezuva nezve zvingangodaro zvigadzirwa zvevakomana veCupertino. Chii chitsva, vhidhiyo inoratidza zvimwe zvinofungidzirwa zvidimbu zveinotevera Apple Watch 2: yakatetepa skrini kupfuura ino yazvino, uye yepamusoro bhatiri bhatiri ...
Sezvauri kuona, muvhidhiyo tinoona mukomana anowana pasuru kubva kune anogovera Byte, kambani yeBritish iyo inotengesa yekutanga Apple zvishandiso uye zvimwe zvikamu. Vhidhiyo yatinoona inofungidzirwa kuti mitezo mitsva yeinotevera Apple Watch 2 ichienzaniswa neazvino Apple Watch. Zvimwe zvidimbu zvatinojekesa imwe yakatetepa screen pane yakapetwa Apple Watch uye bhatiri rine huwandu hwakawanda kupfuura iyo yatinayo izvozvi. Kuchinja kunonzwisisika kwevakomana kubva kuCupertino kuvhura smartwatch nyowani mumazuva anotevera ... Slim pasi chishandiso chinhu chinokumbirwa nevashandisi vazhinjiHongu, zvinogona kuita sechinhu chikuru asi hapana kana ichienzaniswa nemamwe ekumusoro-kwewachi mawadhi anodarika zvakapetwa Apple Watch. Iyo bhatiri ndechimwe chiremaKunyangwe kutaura chokwadi, kana ukaibhadharisa husiku hwese inozogara iwe zuva rese pasina matambudziko (inowanzo gara kupfuura zuva kwandiri).
Iwe unoziva, iri ibhizinesi senguva dzose, ikozvino Tinofanira kutenda imwe runyerekupe kana kumirira kushamisika kweApple. Hongu ichokwadi kuti kumagumo matai mazhinji erunyerekupe, kunyanya pavanenge vachiedza kuipinza mukati nezvinhu zvisinga "bvumike" asi iwe hauzive. Zvakaitika makore ano ekupedzisira zvinotitaurira izvozvo pakupedzisira makuhwa ese akasimbiswa uye isu tinofanirwa kuenda kuna Keynote pasina chero nyasha, Keynote's inotizivisa kune izvo zvataitoziva. Tichaona zvinoitika Chitatu chinotevera, Gunyana 7 ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vhidhiyo inodonha inoratidza yakatetepa skrini uye yakawedzera hupenyu hwebhatiri pane iyo Apple Watch 2
Yakatorwa yakavandudzwa ichipa rutsigiro rweRAW mafaera
Zvinoenderana nemufananidzo uyu, iyo iPhone 7 Plus inosvika neAirPods